England kusimudza zvese COVID-19 zvirambidzo muna Chikunguru 19 kunyangwe spike mune nyowani kesi
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » UK Kuputsa Nhau » England kusimudza zvese COVID-19 zvirambidzo muna Chikunguru 19 kunyangwe spike mune nyowani kesi
Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Health News • nhau • vanhu • Kuvakazve • Kutarisirwa • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • UK Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
Sezvo zvirambidzo zvabviswa, hurumende haichazoda kuti vanhu vashande kubva kudzimba uye muganho wehuwandu hwevanhu vanobvumidzwa kushanyira dzimba dzinochengetwa uchabviswa.
Masiki ekumeso haachazodiwi pakutakura veruzhinji.
Mabhawa ehusiku eEngland achavhurwa.
Muganhu wekukura kwemapoka mudzimba dzevanhu kusvika kuvanhu vatanhatu uchabviswa.
Mutungamiri weBritish Boris Johnson akazivisa izvozvo England inodonhedza angangoita ese akasara eECVID-19 curbs, kusanganisira zvese zvirambidzo zviri pamutemo muna Chikunguru 19. Prime Minister akaita chiziviso chake kunyangwe paine kuwedzera kwenyaya nyowani dzekoronavirus uye tarisiro yerufu rwakawanda kubva kuhutachiona.
Masiki ekumeso haachazodiwa pakufamba neruzhinji, makirabhu ehusiku achavhurwa uye muganho wekukura kwemapoka mudzimba dzevanhu kusvika kuvanhu vatanhatu zvese zvichabviswa, akadaro Johnson pamusangano wevatori venhau.
Mimwe miganhu pahuwandu hwevanhu pamichato uye mariro ichaguma, sekudaro kwekukanganisa magariro zvinodiwa uye kudzikisira mabhawa nemaresitorendi kune tafura-sevhisi chete.
Johnson akati England ichiri kuona huwandu huri kuwedzera hwehutachiona hweCOVID-19 uye kubvumirwa muzvipatara, achiyambira kuti panogona kunge paine zviuru makumi mashanu zvemhosva pazuva musi wa 50,000 Chikunguru.
"Tinofanira kuyananisa zvinosuwisa kune vakawanda vakafa kubva kuCOVID," akadaro, achiwedzera kuti hurumende inofanirwa kutora danho "rakangwarira uye rakaringana" pazvirambidzo.
Johnson akati anotarisira kuti hurumende ichakwanisa kubvisa zvirambidzo zvasara musi waChikunguru 19, pamwe nekuwongororwazve kwedata rezvehutano rakatemerwa Chikunguru 12.
Kuedzwa kwenyika, kutsvaga uye kusarudzika system icharamba ichishanda kubva muna Chikunguru 19, Johnson akadaro, kunyange hazvo hurumende iri kutarisa hurongwa hwakasiyana hwevanhu vakabaiwa zvakakwana nevana. Vanhu vanofanirwa kuzvipatsanura vega kana vaine hutachiwana kana vakarairwa kugara neNHS Bvunzo neTrace.